Alaab-qeybiyeyaal iyo Warshad - Soosaarayaasha Warshadleyda Shiinaha
Galeyda / Qamadleyda
Qalabka lagu buufiyo
Galley / Qamadi / Goos goos
Mashiinka Mashiinka Fududeynaya Cilladaha Beeraha
3Z Karsato Wixii Loogu Tala Galay Cowska Soybean
Harrow Disc culus oo loogu talagalay Beeraha 1BQX
Harrow Disc culus oo loogu talagalay Beeraha 1BJ
Faahfaahinta Waxsoosaarka iniinyaha Farsamada waxay leeyihiin 2, 3，4, 5 ， 6，7 iyo 8 saf. waxaa ka mid ah unug fidinaya, cagaha abuur, coult disc iyo discs, sanduuqa bacriminta. Mashiinka abuurka waxaa ku shaqeeya nidaam farsamo. Beerista makaanikada waxaa lagu qalabeeyaa nidaam isku xira saddex-qodob. Si fudud ayaa loogu qaadi karaa berrinka. Abuurista farsamada waxaa loo isticmaali karaa abuur wanaagsan. Mashiinka waxaa loo isticmaali karaa in lagu beero noocyo kala duwan oo miraha ah (sida galleyda, gabbaldayaha, cudbiga, sonkorta digaagga, soybean, looska iyo digaagga ...
Faahfaahinta Waxsoosaarka Mashiinka beero khudradda wuxuu gaari karaa hal hadhuudh halkii dalool ama hadhuudh badan godkiiba. waxay kuu badbaadin kartaa abuurka Fogaanta abuurka iyo qoto dheer beeritaanka sidoo kale waa la hagaajin karaa. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu beero karootada, digirta, basasha, isbinaajka, salaarta, dhir, khudradda, kaabajka, kufsiga, basbaaska, broccoli, iyo noocyada kale ee miraha yaryar ee khudaarta iyo geedaha. Shaag-abuurka abuurkan miraha khudradda ka sameysan wuxuu ka sameysan yahay maaddooyin gaar ah, oo ah mid aan taagnayn, oo aan ku dhegganayn abuur ...
Faahfaahinta alaabta Dhul yar oo loo isticmaalo galleyda, cudbiga, qamadiga, dalagyada miraha, masagada, lawska iyo iniinyaha jilicsan ee jilicsan ee habka wax lagu beero guud ahaan waa hab dabiici ah oo wax lagu beero, bacriminta, habkan waa sahlan tahay in dadka lagu daalo, waxtarka abuurka oo hooseeya, arrimaha bani'aadamku waxay saameeyaan biqilka iyo koritaanka miraha qaar, taasoo keenta wax soo saar hooseeya. Badeecadani waa nooc ka mid ah gacanta lagu haysto bacriminta, iyo waxtarka sare, mashiinka dhirta bacriminta ah ee bacriminta gacanta lagu hayo. Gacanta ...
Faahfaahinta Waxsoosaarka Khudaarta RY waxay qaadataa aalad miisaamidda miraha dhaadheer oo saxa ah, taas oo ka dhigaysa saxsanaanta abuurka, waxtarka abuurka, kala-goynta dhirta iyo kala-fogaanshaha miraha oo aad uga fiican abuur-gacmeedka; isticmaaleyaashu waxay beddeli karaan giraangiraha curyaaminta ee kala duwan sida ay u kala baahi qabaan, iyo hal mishiin ayaa ku ogaan kara masaafo fog beerista Abuurka qudaarta. Mashiinka oo dhan wuxuu leeyahay qaab dhismeed fudud, naqshad xeel dheer iyo raad yar. Ka dib marka mashiinka la isticmaalo, waxay si weyn u yareyn doontaa foosha ...
Faahfaahinta Badeecada Beerleyda hadhuudhku waxay beerataa sarreen. Waxaad kala dooran kartaa 9 ilaa 24 saf. Badeecaddu waxay ka kooban tahay jir, sanduuqa bacriminta abuurka, mitir abuur, tuubbo ka soo baxeysa bacriminta, fur taranka iyo wheel wax shiida. Qoditaanka, bacriminta, abuurka iyo howlaha isku dheelitirka ayaa lagu dhammayn karaa hal mar. Mashiinka waa fududahay in la hagaajiyo, adag yahay, waxaana loo isticmaali karaa in lagu beero miraha sababo kala duwan. Adoo hagaajinaya caarada jeexjeexa ama saxanka, miraha ayaa isku qoto dheer si loo hubiyo inuu biqil isku mar noqdo. The ...
Faahfaahinta alaabta Mashiinkaan beero toonta waxaa si weyn loogu isticmaali karaa bannaanka iyo buuraha si loo xaqiijiyo abuurista toonta ee baaxadda. Marka la isku hagaajinayo madaxa toonta, waxay xaqiiqsan kartaa in beertada joogtada ah la beero. Qaybta Mashiinka Qeexida Qaybta Mashiinka Qeexida RYGP-4 RYGP-5 RYGP-6 RYGP-7 RYGP-8 RYGP-9 RYGP-10 Safka safka safka 4 5 6 7 8 9 10 Tamarta la isku daray hp 12-20 15-30 18-50 20-60 25-70 25-80 30-90 Ballaca mm mm 80 ...
Shandong Xintengwei Imp. & Exp. Co., Ltd.(RY AGRI), oo la aasaasay 2014, oo ku taal magaalada Linqing, Gobolka Shandong, Shiinaha. RYAGRI waa shirkad xirfadle ah oo keenta mashiinada beeraha iyo qalab kaladuwan, sida cagafcagafyada, iskudhafka goostayaasha, beeralayda, baalalayaasha, buufinta buufinta, mashiinka dubbeyaasha, matoorrada biyaha iyo iwm Nidaam tayo iyo adeeg wanaagsan leh, shirkaddu waxay horeyba ugu dhoofisay Yurub , Unit States, Russia, Iran, South Africa, Nigeria, Ethiopia iyo dalal kale.